Kedu ihe bụ Web Web Design? Ochie
Gịnị bụ Ikike Imezi Ihe? (Ihe ngosi Video na Infographic)
Tuesday, April 28, 2020 Satọde, Febụwarị 27, 2021 Douglas Karr
Emeela afọ iri maka anabata web design (RWD) ka ọ gaa ebe ọ bụ na Cameron Adams bu ụzọ webata ya echiche. Echiche ahụ dị nkọ - gịnị kpatara na anyị enweghị ike ịmepụta saịtị ga-adaba na nlele nke ngwaọrụ a na-ele ya?
Gịnị bụ Ikike Imezi Ihe?
Na-anabata web design (RWD) bu ihe eji eme webusaiti iji chebe saiti iji nye ihe nlere kachasi nma - ogugu di mfe na igodo ya site na imeghari ihe, ichoghari, ma pigharia-gafee otutu ngwaọrụ (site na ekwentị mkpanaaka na kọmputa desktọọpụ) Monitors). Otu saịtị e mere na RWD na-agbanwe nyiwe na gburugburu ikiri ihe site na iji mmiri, grids dabere na onyonyo, onyonyo na-agbanwe agbanwe, na ajụjụ CSS3 mgbasa ozi, mgbakwunye nke iwu @media.
N'aka ozo, enwere ike idozi ihe dika ihe onyonyo dika odi ihe ndi ahu. A bụ ihe a video na-akọwa ihe mere imewe bụ nakwa ihe mere gị ụlọ ọrụ ga-emejuputa atumatu ya. Anyị na-adịbeghị anya redeveloped na Highbridge saịtị na-anabata ma na-arụ ọrụ ugbu a Martech Zone ime otu ihe!
Usoro nke iwulite saịtị na-arụ ọrụ na-agwụ ike dịka ị ga-enwe usoro nhazi nke ụdị gị ndị a haziri dabere na ogo nke nlele.
Ihe nchọgharị maara na nha ha, yabụ ha na-ebupụta mpempe akwụkwọ ahụ site na elu ruo na ala, na-ajụ ụdị ndị kwesịrị ekwesị maka ogo ihuenyo ahụ. Nke a apụtaghị na ị ga-ekepụta ụdị ejiji dị iche iche maka ihuenyo ọ bụla, naanị ị ga-agbanwe ihe ndị dị mkpa.
Rụ ọrụ na iche echiche nke mbụ bụ ụkpụrụ ntọala taa. Brandsdị ndị kachasị mma na-eche abụghị naanị ma saịtị ha ọ nwere mmekọrịta enyi na enyi kamakwa banyere ahụmịhe ndị ahịa zuru ezu.
Lucinda Duncalfe, onye isi ụlọ ọrụ Monetate
Nke a bụ ihe infographic si Monetate na-egosipụta uru ndị dị na imepụta otu nzaghachi na-anabata maka ọtụtụ ngwaọrụ:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ebe nrụọrụ na-eme ihe, tụọ gị Google Chrome nchọgharị (Ekwenyere m na Firefox nwere otu atụmatụ) na- Highbridge. Ugbu a họrọ Lee> Onye Mmepụta> Ngwaọrụ Onye Mmepụta site na menu. Nke a ga-ebu ụyọkọ ngwaọrụ na ala nke ihe nchọgharị ahụ. Pịa na obere akara ngosi mkpịsị aka ekpe nke aka ekpe nke menu mmanya Mmepụta.
Nwere ike iji nhọrọ igodo ụzọ gaa n'elu iji gbanwee echiche site na odida obodo gaa na eserese, ma ọ bụ ọbụna họrọ ọnụọgụ ọ bụla nke ụdị nlele anya. Nwere ike bubatagharịa ibe ahụ, mana ọ bụ ngwa ọrụ kachasị mma n'ụwa maka ịnwale ntọala ị na-anabata ma hụ na saịtị gị dị oke mma na ngwaọrụ niile!
Tags: Cameron kwurunkọwa videomobile anabata weebụsaịtịnhazi mmeghachi omumeihe omuma ihe omumaozi infographicanabata mobile imeweanabata web designrwdKedu ihe na-eme mmeghachi omumekedu ihe na-eme web imewekedu ihe bụ rwd
Mee 31, 2015 na 1: 13 PM
Nhazi webụ abụghị nhọrọ nke ndị na-ahụ maka webụsaịtị ọzọ, ọ bụzi iwu maka ha. Daalụ maka ịkesa ozi a.
Jun 2, 2021 na 6:04 nke ụtụtụ
Daalụ nke ukwuu Douglas maka akụkọ a kọwara nke ọma. M ga-ekweta na nke a n'agbanyeghị na ọdịnaya akụkụ nke ihe. Maka ọtụtụ saịtị anyị na-eme nhazi nzaghachi agaghị ezuru. Anyị chọrọ ọdịnaya na-anabata. Mana maka webụsaịtị ndị ọzọ, anyị ga-ejide n'aka na ị ga-eji akụkọ edekọ nke ọma maka otu esi edozi nke a!
Echere m na ị kwuziri nke ọma, Aaron. O zughị ezu naanị ịmegharị na ịkwaga ihe… anyị kwesịrị iji ọdịnaya eme ihe nke ọma.